के होला नेकपाको स्थायी कमिटी वैठकमा ? - नेपालबहस
के होला नेकपाको स्थायी कमिटी वैठकमा ?
| ११:४७:४० मा प्रकाशित
२३ बैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्र उठेको ज्वारभाटा तत्काललाई साम्य भएको देखिएपनि दुई पक्षबीचको अविश्वास कायमै छ । पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको साथ र सहयोग गुमाएपछि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली फेरि आक्रमक अवस्थामा फर्किएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा समेत मागिसकेको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको गठबन्धन अब एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा बहस केन्द्रित गर्न बाध्य भएका छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले धोका दिएकाले सत्ता समीकरणमा बदलाव आएको ठहर प्रचण्ड– नेपाल पक्षको रहेको छ । एकाएक रक्षात्मक भूमिकामा आईपुगेपछि यो समूह आफ्नो थप रणनीति बनाउन सक्रिय छ ।
हिजो मात्रै सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ निवासमा प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथ खनालबीच गम्भीर छलफल भएको छ । भैंसेपाटी गठबन्धन टुटेकाले आफ्नो भूमिका फेरिएको उनीहरुको ठहर रह्यो । बामदेवले साथ छाडेपनि आफ्नो मुद्धा र अजेण्डा भने नछाड्ने पक्षमा गठबन्धन रहेको छ । यसका लागि स्थायी कमिटी बैठक परिणाममुखी बनाउन उनीहरु गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा ठोस प्रस्ताव ल्याउन प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएका छन् । त्यसैको लागि प्रचण्डले पूर्व गठबन्धनसँग छलफल गरेका हुन् । नेता नेपालले उठाएको मुद्धालाई संवोधन गर्ने जिम्मा पनि अब प्रचण्डको काँधमा आएको छ । विधि पद्धतिबाट पार्टी चलाउनुपर्ने भन्ने नेपालको माग संवोधन गर्न कसरी प्रस्तुत हुने भनेर नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन्– प्रचण्ड निकट स्रोतले बतायो ।
पर्सी बैशाख २५ गते हुने भनिएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको अजेण्डा नै अब एक व्यक्ति एक पद रहने पनि सबैको बुझाई छ । गत शनिबार ओली र प्रचण्डबीच यही मुद्धामा सहमति भएको बताइन्छ । ओलीले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपनि प्रचण्डले व्यवहारमा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । त्यसैले अब पार्टी सञ्चालनको पूरै जिम्मेवारी प्रचण्डले लिने गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ– स्रोतको दावी छ ।
प्रचण्डको मात्र मुद्धा सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो सन्देश नजाओस् भनेर नेता माधव नेपालसँग पनि छलफल गरिएको हो– स्रोतले भन्यो । नेता नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचो मिलेर समग्र पार्टी एकता नहुने भन्दै असन्तोष प्रकट गर्दै आएका छन् । त्यसैले माधवजीलाई पनि मिलाउने काम तपाईं गर्नोस् भन्दै हिजो ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह गरेको जानकारी पनि स्रोतले दिएको छ । नेता नेपालको इच्छा र चाहना बमोजिम अबको स्थायी कमिटी बैठकमा एक नेता एक जिम्मेवारीको प्रस्ताव गर्न लागिएको पनि स्रोतले बतायो ।
हिजै नेता नेपालसँगको भेटमा दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी क्षमता र योग्यताका आधारमा सही व्यक्तिलाई परिचालित गर्नेखालको प्रस्ताव तयार गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् । दुई अध्यक्ष मिलेर विधि र पद्धतिलाई धोती लगाउने विगतको परम्परा अन्त्य गर्न नेता नेपालले सुझाव दिएको पनि स्रोतको भनाई छ । यस्तो प्रस्ताव पास हुने वित्तिकै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले तत्काल एउटा पद त्याग्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी नेकपामा अहिले १९ जनाले दोहोरो जिम्मेवारी पाएका छन्, तिनीहरुलाई पनि यस्तो प्रस्तावले प्रभावित पार्ने अवस्था छ । यस्तो प्रस्ताव पारित हुँदा सबैभन्दा बढी पूर्व माओवादी पक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा नेता नेपालको प्रस्तावले प्रचण्ड पक्ष नै घाटामा पुग्ने अवस्था छ । त्यसैले कम्रेड प्रचण्ड दवावमा हुनुहुन्छ–स्रोतको भनाई छ । नेता नेपालको यस्तो आग्रहलाई ओलीबाट खासै अवरोध नहुन सक्छ,तर प्रचण्ड भने आफ्नै पक्षबाट आलोचित हुनसक्ने भएकाले कसरी जाने भन्ने अन्योल रहेको पनि स्रोतको बुझाई छ ।
स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको गृहकार्य गर्ने काम प्रचण्ड र ओलीले मात्रै जिम्मा लिएकाले नेपाल पक्ष धेरै आश्वस्त नभएको देखिन्छ । नेता नेपाल निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने– विधि र पद्धतिलाई अबलम्बन गर्ने पक्षमा हो भने प्रस्ताव तयार गर्न प्रचण्ड र विष्णु पौडेल मात्र किन ? नेपाल पक्षका नेतालाई समेत सहभागी गराइएको भए आउने प्रस्ताव परिपक्व र व्यवहारिक हुने थियो – उनको भनाई छ ।
शनिबारको सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाल पक्षसँग खासै छलफल गर्न रुचि देखाएका छैनन् । तर हिजो प्रचण्डसँगको भेटमा भने माधवजीलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रस्ताव तयार गर्नुहोला भनेका थिए ।
कोभिड-१९ नियन्त्रण आदेश जारी गरिदै २ मिनेट पहिले
प्रथम मेयर कप फुटसल प्रतियोगिता वैशाख ९ बाट ४ मिनेट पहिले
राष्ट्रपतिद्धारा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्त ९ मिनेट पहिले
नेपाली नारी समाज पोर्चुगलको अध्यक्षमा शिवानी १४ मिनेट पहिले
गायिका रिनाको कस्तो माया जाल २२ मिनेट पहिले
सरकारले हठा्त अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दलहरुसँग परामर्शमा माओवादी केन्द्र २३ मिनेट पहिले
सौन्दर्य पेशाको भविश्य सुनौलो छ : वरिष्ठ सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित ३० मिनेट पहिले
दूध बिक्रीका लागि सङ्कलन केन्द्रतर्फ जाँदै महिला ३३ मिनेट पहिले
शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द ३३ मिनेट पहिले
चैते दशैंमा कर्णालीमा सार्वजनिक २१ घण्टा पहिले
बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले लगाए कोरोनाविरुद्धको पहिलो खोप ४ हप्ता पहिले
सरकारले क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ४ हप्ता पहिले
बादल ओलीतिर, गौतम प्रचण्ड–माधव कित्तामा ४ महिना पहिले
अन्त्येष्टिमा नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सम्मान ८ महिना पहिले
पोखरीमा डुबेर तीन बर्षीय बालकको मृत्यु ८ महिना पहिले
जीप दुर्घटनामा हुँदा चालकसहित १४ जना घाइते १० महिना पहिले